वरिष्ठ नेता नेपालले मागे पार्टीमा ओलीकै हैसियत, जटिल बन्दै एमालेको एकता ! – Mission Khabar
वरिष्ठ नेता नेपालले मागे पार्टीमा ओलीकै हैसियत, जटिल बन्दै एमालेको एकता !
मिसन खबर २४ असार २०७८, बिहीबार १८:१५
काठमाडौं । कार्यदलस्तरमा भैरहेको एमाले एकताको प्रयास निष्कर्ष नजिक पुगेको भनिदैगर्दा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको मन भने अझै मिल्न सकेको छैन । अझ, बरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी सञ्चालन र हरेक निर्णयमा राजनीतिक तथा कानूनी मान्यता हुनेगरी ओलीसँगै आफ्नो पनि हस्ताक्षर हुनुपर्ने माग अघि सारेपछि एकताको प्रयास थप जटिल बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुईमध्ये एक पद ओलीले छाड्नुपर्ने अडानमा रहेका नेता नेपाल वार्ता टोलीका नेताहरुबीच भएका अनौपचारिक छलफल र सहमतिका प्रयासप्रति खासै सन्तुष्ट पनि देखिएका छैनन । ओलीसँग भेट्न समेत नचाहेका नेपाल आफूनिकट नेताहरुको आग्रह र दबाबमा बुधवार राति ओलीलाई भेटेका थिए । आफूलाई विपक्षी गठबन्धनबाट अलग गराउने चालबाजीका रुपमा मात्र वार्तालाई प्रयोग गर्न खोजेको नेपालको आशंका छ । उनी लिखित सहमति बिना ओलीको बोलीलाई विश्वास गर्ने अवस्थामा छैनन् ।
मंगलबार साँझबाट एमाले एकताका लागि अध्यक्ष ओली पक्षका कार्यदल सदस्यहरु सुवासचन्द्र नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल अनि माधव समूहका कार्यदल सदस्यहरु भीम रावल, रघुजी पन्त, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्ट निरन्तर संवादमा छन् । तीनदिनको वार्तापछि दुबैतर्फका सदस्यहरु निष्कर्ष नजिक पुगेको दाबी गरिरहेका छन् । तर ठोस सहमति कहिले हुन्छ एकिन रुपमा भन्न सकिरहेका छैनन । पार्टीभित्रका युवा नेताहरुले एमाले फुट्ने होइन जुट्नु पर्छ जुटाउनुपर्छ भन्दै दबाब दिइरहेका कारण पनि अध्यक्ष ओली र बरिष्ठ नेता नेपाल मिल्न तयार हुन्छन भन्ने आँकलन गरिदैछ । झन्डै डेढ महिनादेखि निष्क्रिय कार्यदल ब्युँतिएर बुधबार साँझको मेरियट होटलको छलफलबाट अध्यक्ष ओली र बरिष्ठ नेता नेपालबीचको संवादहिनता तोडिएको छ । तर दुबै पक्षका अडान यथावत छन् ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलापछि उत्पन्न हुने जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो सरकारको निरन्तरताका लागि विनासर्त नेपालको ठोस प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन् । नेता नेपालले भने विगतमा भन्दै आएको एक व्यक्ति एक पद, ओलीका राजनीतिक कदमको समीक्षादेखि पार्टीभित्रको भावी समीकरणसम्मका विषयमा प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन् । पार्टीका सबै संरचनामा आफ्नो विचार समूहको शक्ति सन्तुलनको विषय उठाएका नेपाल र सर्तरहित एकतामा जोड दिएका ओली बिचको पावर सेयरिङको बिषय सहमतिका लागि पेचिलो बन्दैआएको छ । ओली–नेपाल कार्यदल तहबाट सबै विषय टुंगिएर आओस् भन्ने सहमतिमा पुगेपनि बिवादको समाधान कसरी अनि कहिले हुन्छ चासोका साथ हेरिएको छ । असार १८ मा एकलौटी रुपमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर तीनदिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिनुभएका अध्यक्ष ओलीले १९ गते फैसला आउँदासम्म हस्ताक्षर कायमै राख्नेहरु एमाले रहन्नन्सम्म भन्न भ्याए । आइतबार सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल नेता नेपालको निवासमा पुगेर संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । कार्यदलमार्फत सहमति र संयुक्त वक्तव्यको मस्यौदा ल्याउनुपर्ने नेपाकै चाहाना बमोजिम कार्यदल ब्युतिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार २ जेठ २०७५ मा फर्किंदा पार्टी र जनवर्गीय संगठनहरुलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन लगभग सहमति भएको बताइएको छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटीको संख्या, एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरुको व्यवस्थापन र अदालतको मुद्दामा मध्यमार्गी सहमति जुटेको बताइएको छ । कार्यदलस्तरमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये एउटा जिम्मेवारी, संसद पुनस्थापना भएपछिको सरकारमा एक उपप्रधानमन्त्रीसहित ५ मन्त्री नेपाल समूहबाट र आगामी महाधिवेशनपछिको नेतृत्व नेपाललाई लगायतका विषयमा छलफल भएपनि निष्कर्ष निस्किएको छैन । अहिले पनि दोश्रो तहका र युवा नेताहरु एमालेको बिभाजनले कसैको फाइदा नहुने भन्दै बिवाद समाधानको प्रयासमा जुटिरहेका छन् ।
ओली र नेपालबीच कायम रहेको अहिलेसम्मको असहमति कार्यदल मार्फत तोडिन्छ वा एमाले बिवाद थप बल्झिन्छ, सबैले चासोका साथ प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । अर्कोतिर ओली र नेपालको बाध्यात्मक मिलापमार्फत पदिय भागबण्डा कसरी होला ?अनि एकता दिर्घकालिन होला नहोला भनेर समेत चियोचर्चा भैरहेको छ ।।